British Virgin Islands inozivisa nguva yekudzoka mukugadzirira kufamba kweTropical Storm Dorian
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » British Virgin Islands inozivisa nguva yekudzoka mukugadzirira kufamba kweTropical Storm Dorian
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • British Virgin Islands (BVI) Nhau dzichipaza • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
British Virgin Islands gavhuna Augustus Jaspert
British Virgin Islands gavhuna Augustus Jaspert vazivisa kuti nguva yekumira yekugara ichave iriko kutanga na2: 00 masikati nhasi kusvika na6: 00 mangwanani China, kana kusvika zvabuda pachena, sechikamu chegadziriro yekupfuura Tropical Dutu Dorian.
Chirevo chizere chaGavhuna padutu riri kuuya:
Zuva rakanaka rimwe uye zvese.
Parizvino, imi mose maizenge makasvinura patiri kugadzirira kupfuura kweTropical Storm Dorian. Sezvo madiki masystem akajairwa kuita, Dorian akasimbisa uye akachinja track. Kubva pane modelling yazvino, kumwezve kusimbisa kunotarisirwa, uye maVirgin Islands ave pasi peHurricane Yambiro. Izvi zvinoreva kuti mamiriro echamupupuri anotarisirwa mukati meTeru mukati maawa makumi maviri nemana. Tiri kutosangana nemamwe mhedzisiro kubva kumabhandi ekunze. Naizvozvo, ndinokurudzira vese vagari kuti vagare kure nemigwagwa yevasina kukosha traffic. Kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwevagari panguva yekukwira kwedutu nguva yekudzoka ichave iriko uye ichatemerwa kutanga na24: 2 pm kusvika 00: 6 am China mangwanani, kana kusvika kwese kujekeswa kwapihwa nevakuru vane masimba. Vashandi chete ndivo vanofanirwa kunge vari mumigwagwa.
Kubva pane iyo 11: 00 am forecast, isu tave kusimudzira mukana wekuti ziso raDorian ripfuure pakati peBVI neUSVI, nechokuchamhembe kwakadziva kumabvazuva quadrant yedutu ichipfuura yakanangana neVirgin Islands, ichiunza mhepo dzemhepo. Saka ndiko kutyisidzira chaiko kuTerritory, kunyanya kune avo vanhu vanogona kunge vachiri mudzimba dzinotambura.
Panguva ino tinopa zano vagari munzvimbo dzinotambura kuti vashandise mavhavha avo pazvinogoneka uye vatore matanho ese ekuchengetedza dzimba dzavo. Sangano reNational Emergency Operations Center rakavhurawo dzimba dzekugara dzechimbichimbi, kusanganisira Seventh-day Adventist Church muThe Valley, Virgin Gorda, North Sound Community Center muNorth Sound, Virgin Gorda; Chechi yaMwari Yechiporofita pana Jost Van Dyke; iyo Long Trench Nharaunda Yenzvimbo muKure Turu; uye Chechi yaMwari yeUprofita muRong Look, Tortola.
Ini ndoda kukuvimbisa iwe kuti zviremera zviri kutora matanho akakosha ekudzivirira vanhu veDunhu. Isu tinoramba tichiongorora zvese zvakafanotaurwa uye tiri kupindura ino shanduko iri kukurumidza kuchinja.
Sezvandakaraira pakutanga, iyo NEOC yakaitwa naPremier neni pachangu nhasi kuma7: 00 am Iyi nzira ichapa poindi yepakati yekubatanidzwa kwezviito zvekupindura. Vakuru vemasangano nemadhipatimendi vanga vachiona nezve nzira yekuwana midziyo yehurumende nekuisa vashandi vavo nemidziyo yavo munzvimbo dzinowanikwa mhinduro dzingangodiwa. Vamwe vashandi vehurumende vakumbirwa kuti vagare pamba, nemahofisi asiri ehurumende akavharwa kwezuva iri.
Iwo maRoyal Virgin Islands Mapurisa emapurisa ari kushanda munzvimbo dzese uye acharamba ari patrol kunze kwekunge mamiriro ezvinhu ave asina kuchengetedzeka kuzviita, panguva iyoyo ivo vachatora zvigaro zvekubata munzvimbo dzakagara dzatemwa. Vagari vanofanirwa kunge vapedza gadziriro yavo uye vanofanirwa kurega kuva mumugwagwa panguva ino. Mapurisa achazadzisa nguva yekubva pamba kubva na2pm nhasi uye tinokumbira kuruzhinji kuti vashande pamwe zvizere.
Ndingakurudzire vega vega kuti vape pekutanga kuchengetedzeka uye kuchengetedzeka kwemabhizinesi avo nevashandi, uye nekukumbira kuti vavhare mashandiro nekukasira.
Kufanana nedutu rese remhepo dzinopisa, Dorian anounza kusava nechokwadi, uye, kune avo vedu vakasangana nemadutu e2017, ndangariro dzisina kugadzikana. Shinga, uye yeuka kuti chakanyanya kukosha chinhu chaungaite panguva ino kugadzirira. Pedzisa kugadzirira kwako kwedutu, gara uchiziva uye uteedzere rairo kubva kuNeOC.
Ndokumbira utarise mapuratifomu ese enhau anosanganisira redhiyo, mawebhusaiti eDhipatimendi reNjodzi (bviddm.com) uye BVI Hurumende (bvi.gov.vg), pamwe neiyo peji reDDM reFacebook rekuvandudzwa nezvekufambira mberi uye matipi ekuchengetedza aDorian.
Kune vese vari muVirgin Islands, meseji yangu kwauri ndeyekuti uve wakagadzirira uye ugare wakachengeteka.
Mwari ngaaropafadze uye vadzivirire iyo Nharaunda.